Ny Famindram-po sy ny Fanavotana
admin il y a 4 années
Tontosa soa aman-tsara ny Fihaonam-be nokarakarain’ny Aumônerie Catholique des Prisons Madagasikara. Naharitra dimy andro ny fihaonanana. Nahatratra 55 no isan’ireo mpandray anjara tamin’izany, solotena avy amin’ny ACPM foibe sy ireo ACP faritra ary ACP Diosezy miisa 33.
Pantekoty na Pentekosta
Hafatry ny Ffkm (2017)
Iray amin'ny vanim-potoana handefasan'ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara na Ffkm hafatra ho an'ny Kristianina sy ny olona tsara sitra-po ny fankalazana ny Pantekoty na Pantekosta iza nidinan'ny Fanahy Masina. Indro ny hafatra manontolo ho amin'ity taona 2017 ity.
Message des Evêques 2017
“Produisez donc des fruits dignes du repentir” (Lc 3, 8)
Après leur réunion ordinaire, les Evêques au sein de la Conférence Episcopale de Madagasikara envoient le message suivant aux baptisés et aux personnes de bonne volonté.
Andro iray nivavahana ho an’ny fandriam-pahalemana
Nanangona JRR il y a 4 années
Manoloana ireo herisetra fanolanana ary hatramin’ny famonoana ain’olona dia nanokana andro iray ny diosezin’Antsirabe hitodihana amin’Andriamanitra Notontosaina ny talata 25 avrily teo izany.